Dutchtown, St. Louis ရှိမြို့ပြသည်အိမ်နီးချင်းအစားအစာများကိုစားသည်။ MO • DutchtownSTL.org
မြို့ပြစား Neighborhood FoodHall ကဲ့သို့သော Dutchtown စားသောက်ဆိုင်များတည်ရှိရာအနီးအနားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည် Juanita's Creole Soul Café, pies & အံ့သြစရာနှင့် Pasုံ pastry။ Urban Eats တွင်မီးဖိုချောင်နေရာလိုအပ်နေသည့်စားသောက်ကုန်များနှင့်အချက်အချာကျသောအဆောက်အအုံများအတွက်နေရာထိုင်ခင်းပေးသည့်စီးပွားဖြစ်မီးဖိုချောင်သုံးစက်ရုံလည်းရှိသည်။
မြို့ပြ Eats နှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့သည် စိန့်အန်သိုနီအစားအစာစားစရာခန်း နှင့်အခြား Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုဖန်တီးရန် မြို့ပြသည်ကျန်းမာသောမီးဖိုချောင်ကိုစားသည်လိုအပ်နေသောအိမ်နီးချင်းများကိုကျန်းမာသောအစားအစာပစ္စည်းများပေးသည်။
3301 Meramec စိန့်
မြို့ပြသည်အိမ်နီးချင်း FoodHall၊ 3301 Meramec St.
Dutchtown CID ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေး
ဖြစ်ရပ် 22:6 pm တွင် @ အောက်တိုဘာလ 00
ထပ်တလဲလဲ - သာဓကအားလုံးကိုကြည့်ပါ
အဆိုပါ Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင် ဘုတ်အဖွဲ့ဒါရိုက်တာများသည်သူတို့၏လစဉ်အစည်းအဝေးများကို Urban Eats Cafe တွင်လစဉ်လေးလ၏ ၄ ရက်ကြာသပတေးနေ့ညနေ ၅း၃၀ တွင်ပြုလုပ်သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့သည်ကော်မတီများ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးပြီးအမျိုးမျိုးသောကိစ္စရပ်များတွင်မဲပေးသည်။ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များကိုမဲပေးခွင့်မပြုသော်လည်းအစည်းအဝေးအားလုံးကိုတက်ရောက်ရန်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့် CID အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ဖိတ်ကြားထားသည်။
Dutchtown CID ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
ဖြစ်ရပ် 14:2019 pm တွင် @ ဒီဇင်ဘာလ 10, 00
ဆဌမနှစ်တွင် မြို့ပြစားသောက်ဆိုင်ကဖေး ယူလာပေးတယ် ဗလာအိုး အကျိုးခံစားရရန် စိန့်အန်တိုနီရဲ့အစားအစာစားစရာခန်း။ အဆိုပါကာလအတွင်းကဖေးမှာသူတို့ကို join Downtown Dutchtown အားလပ်ရက်ဆိုင်ခန်းဖြစ်သည် Empty Bowls များအတွက်ငရုတ်သီးရန်ပုံငွေရှာဘို့!
Empty Bowls Fundraiser အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ
ပိုမိုလုံခြုံသော Dutchtown အစည်းအဝေး
ဖြစ်ရပ် 14:2019 pm တွင် @ ဇွန်လ 6, 00
ပိုမိုလုံခြုံသော Dutchtown အစည်းအဝေး Dutchtown ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာပြသနာများကိုတီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်စိတ်ဝင်စားသောအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအတွက်ရပ်ရွာအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Safer Dutchtown တွေ့ဆုံပွဲအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
ဖြစ်ရပ် 25:2019 pm တွင် @ မေလ 9, 30
မြင်းစီးသူရဲများအားလုံးကို Dutchtown Bike Tour တွင်ကြိုဆိုသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းခြံများအားလုံးသို့လည်ပတ်သည့်ရပ်ကွက်အတွင်းဖြတ်သန်းသွားသောလမ်းကိုစီးပါ
ဖြစ်ရပ် 18:2019 pm တွင် @ မေလ 2, 00
ဖြစ်ရပ် 25:2019 pm တွင်မတ်လ 11, 30
မှာအံ့သြဖွယ်မုန့်ညက်ခံစားပါ မြို့ပြစားသောက်ဆိုင်ကဖေး နှင့်ကူညီပေးသည် Carondelet ပန်းခြံ Rec Complex ငါတို့အသိုင်းအ ၀ ိုင်းရှိသူတို့၏ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲစေပါ။
အကြောင်းတစ်ခုအဘို့အထွက် Dine အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာပါ
Appetizers, ကော့တေးနှင့်အနုပညာ Allure
ဖြစ်ရပ် 16:2019 pm တွင် @ ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 00
ဒါဟာ Urban Eats Caféမှာပျော်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ပါ။ ကော့တေး၊ အက်စစ်နှင့်အနုပညာအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက် Urban Eats ရှိ Urban Arts Collective တွင်ကြည့်ပါ Success Midwest အတွက်အဝတ်အစား
Appetizers, ကော့တေးနှင့် Art Allure အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
ဖြစ်ရပ် 28:6 pm အချိန် @ ဇွန်လ 00
အဆိုပါစိန့်လူးဝစ်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း Meetup Group မှ Catan, Carcassonne, Dominion စသည့်ခေတ်မီဂိမ်းများကိုအဓိကထားသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်တွင်မည်သည့်ဂိမ်းကိုမဆိုကစားလေ့ရှိသည်။
Snow Queen's Crystal Pop နှစ်မြှုပ်ခြင်းဆိုင်
ဖြစ်ရပ် 2:2019 pm တွင် @ ဖေဖော်ဝါရီလ 10nd, 00
ထူးဆန်းတဲ့ရိုးရာပွဲတော် ခရီးသွားလာသည့် Pop-up ဖက်ရှင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်နှင့်လက်တွေ့အတွေ့အကြုံကိုတင်ပြသည် မြို့ပြစား! ဤဖြစ်ရပ်သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးကလေးနှင့်အဆင်ပြေသည်။
Snow Queen's Crystal Pop Immersion ဆိုင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
ဖြစ်ရပ် 25:2019 pm တွင် @ ဇန်နဝါရီလ 6, 00
ဒီနေရာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် ဇန်နဝါရီလ 17th, 2021 .
ဒိန်းမတ် သောနေရာများ ကာဖီဆိုင် မြို့ပြသည်အိမ်နီးချင်း FoodHall ကိုစားသည်